एक अर्कामा अविश्वासको खाडल बढाएर सुशासन प्राप्त हुन सक्तैन « प्रशासन
एक अर्कामा अविश्वासको खाडल बढाएर सुशासन प्राप्त हुन सक्तैन
प्रकाशित मिति :7September, 2020 10:30 am
निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिन २०१३ भदौ २२ गतेको सम्झनामा २०६१ सालदेखि निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको हो । ‘सुशासन र प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता’ मूल नाराका साथ २०६१ मा मनाइएको पहिलो निजामती सेवा दिवसपछि हरेक वर्ष नयाँ नयाँ नाराहरूसहित मनाइँदै आएको दिवस २०७७ मा आइपुग्दा ‘स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्धि र सुशासन’ नारा तय गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा ‘निजामतीमा सुशासन’लगायत विषयमा केन्द्रित रही नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालसँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानी ।
सुशासनको कुरा जोडतोडले उठेको देखिन्छ, कर्मचारी र सुशासनको अन्तरसम्बन्धबारे केही प्रस्ट्याइ दिनुहोस् न ?
सुशासनका विभिन्न पक्ष हुन्छन् जस्तै राजनीतिक सुशासन, आर्थिक सुशासन, प्रशासनिक सुशासन, नैतिक सुशासन आदि । आर्थिक सुशासन, प्रशासनिक सुशासन र नैतिक सुशासनमा प्रशासनयन्त्रको मुख्य भूमिका हुन्छ । कानुन अनुसार प्राप्त अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यवोध र आचार संहिताको सही पालनाले प्रशासनिक सुशासन र नैतिक सुशासन कायम गर्न सकिन्छ र नागरिकको विश्वास जित्न सकिन्छ । सुशासन ऐन र नियमावली, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी ऐन र नियमहरू, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली, सुशासन सम्बन्धी ऐन र नियमावलीको पालना र कर्मचारीका आचारसंहिता सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना यस अन्तर्गत पर्दछन् । निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा निजामती कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था हो । यसको सही पालना हुन सक्यो भने कर्मचारीले सुशासनमा सहयोग पुर्‍याएको मानिन्छ ।
पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रबाट कर्मचारीतन्त्रमा सुशासन भएन भन्ने आवाज उठिरहेको छ, यो कसरी सम्भव छ ?
अघिल्लो प्रश्नको उत्तरमा समावेश भएका कानुनी र नैतिक विषयको अभाव देखिँदा यस्तो आवाज उठेको हो । कर्मचारीवर्गले यस पक्षमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
सुशासन क–कसबाट कसरी पालना भयो भने नागरिकस्तरमा त्यसको अनुभूति गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि ती निकाय तथा व्यक्तिहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
देशको नीति, कानुन र संस्थागत व्यवहारलाई सही तरिकाले सम्बद्ध कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेका छन् छैनन् भनेर सर्वसाधारण नागरिक र तिनका संस्था वा प्रतिनिधिले हेरिरहेका हुन्छन् । कर्मचारीको व्यवहारप्रति नागरिकको विश्वास बढेको र सेवा प्राप्तिमा सन्तुष्टि भएको अवस्थाले सुशासनको अनुभूति दिलाउँछन् । सम्बन्धित निकाय र तिनका पदाधिकारीले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको सही पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । हरेक कर्मचारीले आत्ममूल्याङ्कन गर्न सकेको खण्डमा सही मार्गमा अघि बढ्न सहयोग पुग्छ । राजनीतिक तहबाट कर्मचारीको क्षमता र इमान्दारिताको निष्पक्ष मूल्याङ्कन र सोही अनुरूपको व्यवहार प्रदर्शन हुनु आवश्यक छ । एक अर्कामा अविश्वासको खाडल बढाएर सुशासन प्राप्त हुन सक्तैन ।
विगत केही वर्षयता हरेक वर्ष भदौ २२ गते मनाइँदै आइएको निजामती सेवा दिवससँगै यस पटक पनि ‘स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारा दिइएको छ, नाराको सान्दर्भिकता र औचित्यतालाई कसरी पुस्ट्याइँ कसरी गर्न सकिएला ?
नारा एउटा दूर दृष्टि जनाउने मानक हो । त्यस नाराले राखेको दृष्टिकोणको गन्तव्यमा पुग्नको लागि योजना र कार्यक्रमसहित कार्यान्वयनमा जानु पर्ने हुन्छ । तर प्रत्येक वर्ष नारा तय गर्ने कार्यमा हामी सीमित भइरहेका छौँ । नयाँ र आकर्षक नारा सिर्जना गर्नुलाई हामीले उपलब्धि मान्न थालेका छौँ । गत वर्षको नाराको कार्यान्वयन कुन हदसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइयो भनेर मूल्याङ्कन गर्ने र देखिएका कमी कमजोरी हटाउने गरी अर्को वर्षको नारा तय गर्ने परिपाटी हामीले बसाउनै सकेनौँ । यस किसिमको परिपाटीको अभावमा कुनै पनि नाराको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन हुन्छ । यस तर्फ ध्यान दिनु अत्यावश्यक भइसकेको देखिन्छ ।
नारा नै उल्टो भयो कि भन्ने पनि कुरा उठिरहेको छ, सक्षम भएपछि स्वच्छता कायम हुने र सुशासन पछि मात्रै समृद्धि आउने हो भन्ने पनि केही तर्क उठेको देखिन्छ, यहाँलाई के लाग्छ ?
नारा उल्टो वा सुल्टो भन्दा पनि आगामी वर्ष यस नाराको सान्दर्भिकता छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । देशको मूल नीतिसँग यस नाराको सम्बन्ध कस्तो छ भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । शाब्दिक रूपमा हेर्दा नारामा खोट लाउनु पर्ने देखिँदैन ।
कर्मचारीतन्त्र अहिले हिँडिरहेको बाटो कस्तो देखिराख्नु भएको छ ?
कर्मचारी वर्ग सक्षम र इमानदार हुनु आवश्यक छ । यसैले कर्मचारीको मार्ग भनेकै सक्षमता र इमानदारिताका साथ अघि बढ्नु हो । यस मार्गमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन सकिरहेको छैन । सक्षमताको मार्ग सहज बनाउने काम सरकारको हो भने इमानदारिताको मार्ग सहज बनाउने दायित्व कर्मचारी आफैँको हो । सरकारले कर्मचारीको लागि न्यूनतम जीवन निर्वाहको लागि पर्याप्त तलब र सुविधा, अध्ययन र तालिमको अवसर र वृत्ति विकासको समुचित व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । त्यसै गरी कर्मचारीले कानुनको परिपालना र जनताको निष्पक्ष सेवा गरी इमानदारिता प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ । यी दुवै पक्ष सबल नदेखिएको अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले सरकार र कर्मचारी दुवै सजग हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
निजामती पुरस्कारको बारेमा विगत र वर्तमानमा तपाईँको धारणा के छ ?
निजामती सेवा पुरस्कार स्थापनाको उद्देश्य पूरा हुने गरी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । यसमा भागबन्डा गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।
Tags : कर्मचारी निजामती सेवा पुरस्कार शारदाप्रसाद त्रिताल